ဆာမူရိုင်းများ၏လျှို့ဝှက်ကုဒ်ကဘာလဲ? Bushido ကဘာလဲ? - Samurai Ninja Museum
ဆာမူရိုင်းများ၏လျှို့ဝှက်ကုဒ်ကဘာလဲ? Bushido ကဘာလဲ?
Bushido ဆာမူရိုင်းစစ်သူရဲ၏လျှို့ဝှက်ကုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆာမူရိုင်းစစ်သူရဲအသက်တာ၏အထူးလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဘဝ7အခြေခံမူအပေါ်မှီခို။ ဤရွေ့ကား7စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို “bushido ။ ” ဟုခေါ်ခဲ့ကြသည် Bushido နှစ်ပေါင်းရာချီများအတွက်ဆာမူရိုင်းများ၏ဘဝတွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ဤရွေ့ကား Bushido ၏7အခြေခံမူနေသောခေါင်းစဉ်:
ဖြောင့်မတ် (義 gi) ။ တရားမျှတရေးအတွက်ဆာမူရိုင်းများအတွက်အရေးကြီးဆုံးသီလဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကစစ်မှန်တဲ့ဆာမူရိုင်းအရေးပါသောအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မထားဘူး။
သစ္စာရှိမှု (忠義chūgi) ။ သစ္စာရှိမှုအသက်တာ၌ 2nd အရေးအပါဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆာမူရိုင်းအစဉ်အမြဲသူ့သခင်ကိုသစ္စာခံဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါဆာမူရိုင်းလည်းသူ့သခင်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်သူ၏တာဝန်အသက်တာ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုယုံကြည်သင့်ပါတယ်။
ဂုဏ်အသရေ (名誉 meiyo) ။ ဂုဏ်အသရေမပါဘဲတစ်ဦးကအသက်တာကိုတစ်ဦးဘဝကိုမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဦးဆာမူရိုင်းအမှားစေသည်ဆိုပါကသူသည်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေကျူးလွန်ခြင်းဖြင့်သူ၏နာမအားချီးမြှောက်သင့်ပါတယ်။ (ဥပမာ: 47 ဆာမူရိုင်း (ထို Ako ဆူပူမှု) ၏ဇာတ်လမ်းကို။
ရိုသေလေးစားမှု (礼 rei) ။ တစ်ဦးကဆာမူရိုင်းအစဉ်အမြဲရန်သူကိုလေးစားသင့်ပါတယ်။ တစ်ဦးကဆာမူရိုင်းတိုက်ပွဲမတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်သူ၏ပြိုင်ဘက်လေးစားပါသည်။ တစ်ဦးဆာမူရိုင်းကသူ့ပြိုင်ဘက်ဦးသေဆုံးရင်တောင်သူကအလောင်းကိုရန်အလွန်လေးစားသည်။
ရိုးသားမှု (誠 SEI) ။ တစ်ဦးကဆာမူရိုင်းတည်ရှိသည်ဘူး။ “လှညျ့စားခွငျး” ဟုဆာမူရိုင်း၏စာအုပ်ထဲတွင်တည်ရှိမထားဘူး။
ရဲစွမ်းသတ္တိ (勇 Yu) ။ တစ်ဦးကဆာမူရိုင်းဆုံးအထိတိုက်။ တစ်ဦးကဆာမူရိုင်းဘာမှကိုကြောက်ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ သူသည်သေမင်း၏မကြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကယုံကြည်သောသူတစ်ခုခုတိုက်သောကြောင့်, တစ်ဦးကဆာမူရိုင်းအစဉ်အမြဲသတ္တိဖြစ်ပါတယ်။
ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (誠 Makoto) ။ တစ်ဦးကဆာမူရိုင်းလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲဘူး။ သူဟာပုစဉျးကဲ့သို့ဖြစ်၏, သူကအမြဲရှေ့ကိုလှုံ့ဆျောသူပြန်လှုံ့ဆျောပေးခဲ့ပါဘူး။
Categoriesဆာမူရိုင်းနှင့် Ninja (Burmese) Tagsbushido, samuri, ဂုဏ်အသရေ၏ code ကိုတစ်ဦးဆာမူရိုင်းဖြစ်ခြင်း၏စည်းမျဉ်းများ, ဂုဏ်အသရေ၏ဆာမူရိုင်းကုဒ်, ဆာမူရိုင်း, လျှို့ဝှက်ကုဒ်လျှို့ဝှက်ကုဒ်
Previous PostPrevious Самурайн дайчид өнөөдөр хэвээр байна уу?
Next PostNext समुराईको गुप्त कोड के हो? बुशोडो के हो?